धेरै शताब्दीयौंदेखि, रूस को क्षेत्रमा बस्ने मान्छे, एउटा सुन्दर छोरी Elena नाम दिन्छ। नाम को गोप्य यसको सबै मालिकहरूलाई चासो छ, यसलाई आफ्नो बच्चा भनिन्छ गर्न योजना छन् जो आमाबाबु, थाहा पनि उपयोगी छ। कहाँबाट यो आउँछन्, रहस्य यसलाई सम्बन्धित के को भाग्य के प्रभाव?
Elena नाम: उत्पत्ति
सुमधुर नाम, धेरै अरूलाई जस्तै, हाम्रो देशमा लोकप्रियता को आनंद, ग्रीक जरा, यो Selena जस्तै सुनिन्थ्यो गर्दा पटक त्यहाँ थिए, चन्द्र रूपमा डिजाइन गरिएको थियो पुरातन ग्रीस बासिन्दाहरू छ। यो अनुमान गर्न सजिलो छ कसरी महत्त्वपूर्ण शब्द "Elena"। नाम अनुवाद: "चमकदार", "बिम", "प्रकाश को रे"।
पहिलो पटक राजकुमार व्लादिमीर को प्रयासमा बप्तिस्मा पछि रस भयो तथाकथित छोरीहरू थाले लागि, यो वर्ष 988 मा भएको थियो। पहिलो सुन्दर र असामान्य नाम पुरातन रूसी आचरण को प्रतिनिधिहरु द्वारा सराहना। पत्नी गर्व अलेक्जेन्डर Jagiellon, इवान कलिता जस्ता प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्याङ्कले द्वारा पहना।
धेरै मानिसहरू आश्चर्य: एलन र ऐलेना - एक नाम? साँच्चै, Alain - जबकि नै मूल्य कायम राखेर सबैभन्दा ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ, र अन्ततः स्वतन्त्रता को विभिन्नता। बालिका पनि, स्त्री नरम र supple हेर्न चाहने, Ilene, spruces, मृग कल गर्न थाले। लोकप्रिय diminutive विकल्पहरू: हेलेन, Lenusya, Lence।
शायद पाउन रोमी सम्राट् Konstantina Velikogo जन्म दिए जो एक महिला बारे कहिल्यै सुनेका गर्ने, पुरातन इतिहासको विशेषज्ञहरु, त्यो पनि Elena नाम लगाउँथे। आफ्नो मुलुकका मसीहीधर्म फैलाउने लागि लडेका उहाँको प्रसिद्ध छोरा, समर्थन, यो विश्वास गर्न पनि अपिल।
पौराणिक कथा Elena Konstantinopolskaya एउटा दूत उनको दुनियाँलाई जहाँ येशूले सम्बन्धित अवशेषहरूको लुकेको छ ईश्वरीय ठाउँमा भन्नुभयो जो सपना थियो कि यो छ। Dreaming जहाँ उनको लाश राख्ने बाकस फेला परेन प्यालेस्टाइन, र प्रभुको क्रस गर्न एक यात्रा लिन महिला उक्सायो। Constantine आमा पनि चर्च को एक ठूलो संख्या, गरिब र बिरामी को patroness को संस्थापक रूपमा प्रसिद्ध भए। उनको लागि धन्यवाद, धेरै आफ्नो स्वतन्त्रता बेमनासिब दोषी मान्छे पाउनु भएको छ।
बाल्यकाल को प्रकृति
त्यसैले, प्रारम्भिक बाल्यकाल Elena मा के हुनेछ? नाम को गोप्य यसको मालिक सपना संसारमा बस्ने भनी उल्लेख। परिवेश पनि उनको Tales, दन्त्यकथा, मिथक आकर्षित कसरी हेर्न केटी को जीवन को प्रारम्भिक वर्ष यो देख्न सक्छौं। सानो हेलेन अक्सर मनपर्ने दन्तिये वर्ण आफूलाई कल्पना गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई वरिपरि वास्तविक संसारमा princesses हेर्न इन्कार भने, तिनीहरूले आफूलाई मा फिर्ता गर्न सक्षम छन्। यो आफ्नो साथीहरूको सञ्चार केही कठिनाइ सिर्जना गर्छ।
एक बच्चा, लीना फरक credulity रूपमा, तर यो झूठ उनको सिफारिश छैन। ठगी को शिकार जस्तै महसुस, केटी पक्कै abuser संग बसोबास गर्न प्रयास गर्नेछ। कठिन, गर्न पनि क्रूर सक्षम आफूलाई देखाउन Elena एक बच्चाको रूपमा। नाम को रहस्य यसको मालिक बदला कौशल फरक भन्ने दाबी।
लेन अत्यन्तै दुर्लभ लोभी बीचमा तिनीहरूले सजिलै तपाईंका साथीहरूले तपाईंको मिठाई र गुडिया दिन सक्छन्। तिनीहरूले एक शौक ध्यान गर्न कठिन हुन सक्छ, सोख परिवर्तन राख्नुहोस्। तर आमाबाबुले बारेमा बच्चा स्कूल जाने कसरी चिन्ता हुँदैन, एउटा उत्कृष्ट स्मृति यसलाई सजिलै प्रशिक्षण लोड सामना गर्न अनुमति दिन्छ। तैपनि, लीना कहिलेकाहीं पाठ पछि प्राप्त गर्न बल छ। उनको शिक्षक प्रसन्न छन् ती विषयहरुमा उनको सबै भन्दा राम्रो मूल्याङ्कन।
कौतूहलपूर्वक, Elena मालिक को नाम उनको एक पिताजी जस्तो बनाउँछ। यो समानता उपस्थिति, गुण मा प्रकट हुन सक्छ। उल्लेखनीय एक बच्चा लीना आफ्ना भावनाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अन्यथा किशोरावस्था मा, सिक्छन् यदि अत्यधिक emotionality उनको र अरूलाई समस्या धेरै ल्याउन सक्छ। खराब केटी चिन्ने मानिसहरूले यसलाई बढ्तै लजालु, छैन इच्छुक कुराकानी गर्न लाग्छ सक्छ। तर, उनको cheerfulness, आशावाद, कल्पना जस्तै घनिष्ठ मित्र।
एक बच्चा शायद लीना मित्र को एउटा प्रशस्त दावा छ भने, आफ्नो युवावस्थामा स्थिति परिवर्तन छ, केटी कुराकानी गर्न प्रयास गर्न थाल्छ। पनि अन्ततः नै उनको जो यो admirers धेरै प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, इश्कबाज क्षमता महसुस गराउँछ। यो Elena धन्यवाद बाल्यकाल देखि हुन चाहन्थे जो एक "राजकुमारी", बन्ने, मन को शान्ति भेट्टाउनुहुन्छ।
अर्को रोचक तथ्य, हुर्केपछि Elena हुन्छ जो। नाम को गोप्य यसको मालिक दैनिक जीवनमा विशेष महत्त्व संलग्न छैन भनी उल्लेख। त्यो खाना को मामला मा शायद picky, asceticism लागि इच्छा विभिन्न प्रकारको, अक्सर आलस्य को उचित दिनुहुन्छ। भान्सा - छैन भन्दा मनपर्ने स्थान लीना, गृहकार्य त्यो रूपमा भारी कर्तव्य मानते।
Elena लागि अर्थ परिपक्व मित्र आफ्नो युवावस्थामा भन्दा धेरै कम छ, यो शायद आफ्नो घर छोडेर, एउटा वास्तविक homebody परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। यो नाम प्राप्त गर्ने महिला, मान्छे आफ्नो भित्री संसार प्रकट गर्न हिचकिचाउने, यो अरूले पनि राम्ररी प्रयास गर्न कठिन छ।
सकारात्मक र नकारात्मक गुण
त्यसैले, के फाइदा र बेफाइदा Elena, के नाम वर्ण मा एक प्रभाव छ? केटी, यो, प्रियजनलाई संग सम्बन्ध मा लगभग सधैं इमानदार प्राप्त। जन्मजात दया उनको दया देखाउन, यो आकर्षित भएका ती मदत गर्न इच्छुक बनाउँछ। Lena धेरै शायद मूर्ख हो, र तिनीहरूले प्राप्त एक चरम अवस्थामा हराएको, तिनीहरूले तर्साउन कठिन छैन।
निस्सन्देह, मालिक नाम हो र नकारात्मक गुण। कुनै पनि उमेर मा, लीना अत्यधिक महत्त्व कहिलेकाहीं बाहिर संसारमा यो महत्त्वपूर्ण घटना लिएर स्थानको दृष्टि गुमेको, आफ्नै आध्यात्मिक अनुभव संलग्न। यो अरूको गल्ती विश्लेषण, सिक्ने सक्षम छ, तर, तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई Committing मानिसहरूलाई संकेत खुसी। अक्सर, Elena यसको वर्तमान चरित्र authoritativeness मा पनि सैद्धान्तिक बन्नेछ। पहिले नै उल्लेख रूपमा, महिला को ठाउँमा थाहा छैन कृपा। विभिन्न तरिकामा शत्रुहरू सामना गर्न तयार,
नाम Elena, दुर्भाग्य, आफ्नो मालिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य मा, दिन छैन विपरीत बरु। यसको weakest देखि बाल्यकाल को स्नायु प्रणाली हो। Lena लगातार अन्तस्करणले, अग्न्याशय को राज्य निगरानी गर्न आवश्यक छ, एक उरोलोजस्त नियमित परीक्षा undergo।
चाखलाग्दो कुरा, त्यो उनको छोरी स्वास्थ्य हदसम्म आमाबाबुले निर्भर हुनेछ के। तिनीहरूले उनको मा डाले खेल को एक प्रेम बाल्यकाल मा बाध्य छन्। Lena स्वेच्छाले समय उपयोगी व्यायाम, निहित आलस्य संग सम्बन्धित छ जो दिन छैन। साथै, नाम को मालिक ध्यान, आफ्नो आहार निगरानी गर्नुपर्छ जंक खाना अप दिन्छ। यो मात्र होइन आकार संरक्षण गर्न, तर पनि स्वास्थ्य कायम राख्न महत्वपूर्ण छ।
नाम Elena को अर्थ - "प्रकाश", "घाम", "उज्ज्वल।" यस्तो उनको धेरै प्रशंसक, उनको स्त्रीत्व र कोमलता द्वारा आकर्षित देखेर। आनन्द यी महिलाहरु अक्सर तिनीहरूलाई सम्बन्ध मा बुद्धिमानी बुबा को भूमिका मा लिन इच्छुक छ जो, भन्दा आफु धेरै पुरानो मानिसको काखमा पाउन। Lena साँचो आवेग को प्रतिनिधिहरु विपरीत सेक्स हुन सक्छ, तर यस्तो बलियो अर्थमा शायद आफूलाई कवर।
औसत Elena - विजेता परिर्वतनशील मुड। यो आज र भोलि पूर्ण indifferent प्रेममा जस्तो लाग्न सक्छ। म उनको प्रशंसक, बालिका shamelessly प्रयोग लाभ को सबै किसिमका आफ्नो भक्ति देखि चित्रकला के हुन् आश्चर्य।
उच्च नाम अनुकूलता मानिसहरू जसको नाम Elena दिमित्री एन्ड्रीव, इगोर, Yaroslav छ। आफ्नो मालिक टाढा रहन सिफारिस Stepanov, तुलसी, अनातोली Alexandrov।
गोपनीयता सर्तहरू तपाईं एउटा नाम Elena गर्न अनुमति दिन्छ मा पूर्वानुमान के हुन्? विवाहमा महिलाहरु को भाग्य सिधै उनको चुनिएको एक सम्बन्धित छ। यी बालिका विपरीत सेक्स को सबै भन्दा जिद्दी भन्न उनको विवाह गर्न चाहने एक मानिस, लगनशील भई लागिरहेमा, "हो" सुरक्षित हुनुपर्छ।
विवाहित लीना, मांग डाह फरक। तिनीहरू साँचो मनले सबै माथिको चुन्नु परिवार राम्ररी जा मूल्यांकन, यो पुरानो मित्र, गैर-समय-खपत सोख संग जानेबेलामा आवश्यक हुन सक्छ भनेर आशा। निस्सन्देह, तिनीहरूले पनि निरन्तर आफ्नो प्रेम प्रमाणित गर्न, उपहार, आश्चर्य र compliments बारे मा भूल छैन आवश्यक छ।
"एक keeper" - त्यसैले यी महिला परिवार आफ्नो भूमिका, घरेलू मामिलामा गर्न नकारात्मक मनोवृत्ति बाबजुद हेर्नुहोस्। विवाह रही, तिनीहरूले पति र छोराछोरीलाई आफु बिताइरहेका, काम बाट रिटायर खुसी छन्। नियम, हेलेन देखि एक राम्रो आमा दिइएको र छोराछोरीलाई सधैं ढाकिएको र खुवाइन्छ। तर, यो सधैं सम्भव सन्तानका साथ आध्यात्मिक affinity हासिल छ। Frugality - अर्को विशेषता निहित lēnām। तिनीहरूले अव्यावहारिक खर्च, पैसा बिना परिवार छोड्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो कार्यहरू, र दोस्रो आधा अनुमति छैन जोगिन।
नाम Elena यसको मालिक इश्कबाज एउटा निश्चित predisposition दिन्छ। यो पति उनको विश्वासघात डराएका हुनुपर्छ भनेर होइन, यस्तो अवस्थामा अति दुर्लभ छन्। नियमित साझेदार संग निकटता अन्ततः, दिनचर्या गतिविधिमा लीना गर्न उत्तेजित गर्दछ यो शायद बिल्कुल अभाव, तपाईंको सेक्स जीवनमा विविधता थप्न प्रयासहरू।
एक केटी चुन्नु नै नाम उनको आँखा मा उचित सेक्स को अन्य प्रतिनिधिहरु संग इश्कबाज गर्न सिफारिस गरिएको छैन संग। Elena, आफूलाई अलि flirtation अनुमति दिने, एक प्रेमी देखि यस्तो व्यवहार सहन छैन वा पति insulted र बदला लागि कामवासना संग inflamed महसुस हुन सक्छ।
पेशा को विकल्प
हेलेन नाम इतिहास छैन यो पेसा मामलामा सहित प्रदान गर्दछ कि संभावनाहरु, यसको मालिक को लागि यति रोचक छ। रचनात्मकता - काम अक्सर यस्तो महिलाहरु छ जसमा एक क्षेत्र। Lena बन्न सक्छ कलाकार, डिजाइनर, लेखक, तथापि, एक गायक वा किनभने प्रचार प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति एक अभिनेत्री रूपमा सफल असम्भाव्य छ।
सही विज्ञान को विकास पनि जटिलता को नाम को मालिक बनाउँछ। Elena उपयुक्त पेशा एक इन्जिनियर, एक ठूलो लेखापाल यो प्राप्त गर्न सक्छौं। तर, यो तपाईंको आफ्नै व्यवसाय खोल्न आवश्यक छ, यो परियोजना एक विफलता हुनेछ भन्ने सम्भावना छ।
सबैभन्दा लेन लगभग सजिलै यो भर गर्न accustomed बाल्यकाल देखि एक विकसित अंतर्ज्ञान को मालिक हो। तिनीहरूमध्ये धेरै महिला, झुकाव संग endowed नै digging, melancholy गर्न। राम्रो conversationalist र adviser Elena भवदीय केही साथीहरू छैन यो आफ्नो भित्री रहस्य थाह पनि भने, उनको रहस्य गर्न privy सामान्यतया गर्छन, आफै ठान्नुहुन्छ। तर, त्यो कसरी, आवश्यक भएमा सुन्न र अन्य व्यक्ति, उद्धार आउन इच्छुक सान्त्वना थाह छ। तैपनि, लीना यसको कमी देखि ग्रस्त, कुराकानी गर्न कहिल्यै गर्छन छैन।
गीत गाउने, चित्रकला - धेरै प्रतिभा मालिकको नाम मा प्रारम्भिक बाल्यकाल मा देखा पर्न सक्छन्। लेन भनी यो बुनाई वा ओरिगेमी छ कि, सुन्दर कुराहरू सिर्जना गर्न हात स्वामित्व अनुमति गतिविधिहरु समावेश। तर आफ्नो क्षमता दुर्लभ अपवाद मात्र, नजिक मान्छे देखाउने सार्वजनिक अत्यन्तै दुर्लभ छ तिनीहरूलाई देखाउन छन्।
दिन नाम हेलेन, परम्परा अनुसार, दुई पटक एक वर्ष आउँछ। यो जुन तेस्रो हो, सम्राट Constantine गरेको प्रसिद्ध आमा को जन्म दिन मानिन्छ, प्रभु को क्रस पत्ता र धेरै मन्दिर vozdvignuvshey। र नोभेम्बर 12 मा - सर्बिया हेलेना राजा को जन्म आमा को दिन, आफ्नो मृत्यु पछि सेन्ट घोषणा गरे। यो क्यान्सर चिन्ह अन्तर्गत जन्म छन् केटीहरू गर्न सिफारिस गरिएको छ पहिलो स्थानमा नाम, यो तिनीहरूलाई बढ्न मदत गर्नेछ, राम्रो नरम, कूटनीतिक, परिवार परम्परा आदर।
वर्णन, विशेषताहरु र परिणाम: "म मेरो प्राण जोडीलाई भेट्न जब" अनुमान
Carnelian पत्थर: जादुई गुण
Retinue Voland: वर्णन, Bulgakov गरेको उपन्यास मा कैरेक्टराइजेशन र भूमिका
मामला कि को भाग्य यदि यो बायाँ आँखा scratched छ?
कम्पनी ASRock देखि motherboard G41M-VS3 मोडेल: विशेषताहरु र निर्दिष्टीकरण
पिप भाषा - कारणहरू, लक्षण र उपचार
लेनोभो G500S: विशेषताहरु, प्रमुख सुविधाहरू